RV any ejipta · Global Voices teny Malagasy
Tantara misongadina mikasika ny RV any ejipta
Minya: Manana tantara maro hafa ireo mpandray anjara amin'ny atrikasa
Tantaran-tsedra no mipoitra anatin'ilay tetikasa Women of Minya Day by Day, saingy teo koa ny faharetana nandresena ireo fanamby ireo. Manome fahafahana ireo vehivavy haneho ny heviny momba ireo olana mahakasika ny tenany ireo atrikasa omen'ny New Woman Foundation, indrindra momba ireo lohahevitra mikasika ny fahasalamana sy ny zony ara-dalàna.
Amin'ny maha isan'ny tetikasa tohanan'ny Rising Voices ny Women of Minya Day by Day, manohy mizara ny heviny momba ireo fiovàna farany niseho tao amin'ny fiarahamonina Egyptiana ireo vehivavy monina ao ambanivohitr'i Dawadeyya (Minya, Egypta), no sady manoratra momba ny fiainany manokana any an-tranony.
Bilaogera Asongadina: Ahmed Awadalla
Iray amin'ireo nahazo vatsy avy amin'ny Rising Voices ny tetikasa “Exploring Taboos (Firesahana ny Fady)” nokarakarain'ny ekipa Nazra tao Kairo. Ny tanjon'ny tetikasa dia ny hanome toerana azo antoka ho an'ny vehivavy sy ny lehilahy ao Ejypta mba hiresaka momba ny olana tsy firesaka firy.
Mediam-bahoaka21 Oktobra 2019
Dika21 Oktobra 2019
Antsafa15 Oktobra 2019
Tantara mikasika ny RV any ejipta
Antsafa 20 Septambra 2018
Sary avy amin'ny Mokattam Blog Tales
Mediam-bahoaka 09 Aogositra 2018
Indro ny tohin'ny andian-dahatsary misy fizarana telo notontosain'ilay Egyptiana mpanatontosa sarimihetsika Mahmoud Saber, izay mijery akaiky ny tetikasa tsirairay ao anatin'ny hetsika Rising Voices tany Egypta. Manasongadina ny tetikasa Mokattam Blog Tales ity lahatsary ity.
Fampahafantarana ny Mokattam Blog Tales
Antsafa 08 Aogositra 2018
Mpandrindra ny tetikasa Mokattam Blog Tales i Nesma Gewily ao amin'ny Masaken Alzelzal - Alhadba Alwosta, manodidina an'i Kairo, Egypta. Ato amin'ity tantara ity, manoritsoritra momba ny tetikasa i Nesma, niaraka tamin'ny fiara-miasa tamin'ny fikambanana Alwan Wa Awtar izay hampianatra ny... fampiasana ny fitaovan'ny fampitam-baovaon'olon-tsotra.
Fampahafantarana ny “Vehivavin'i Minya isan'andro”
Antsafa 06 Aogositra 2018
Tetikasa vaovao indrindra ao amin'ny New Women Foundation (Orina Mpanasoa ho an'ny Vehivavy Olom-baovao) any Kairo ny vehivavin'i Minya isan'andro. Nanome atrikasa ho an'ny vehivavy monina sy miasa any El Minya any amin'ny 250 km eo atsimon'ny renivohitra i Nevine Ebeid sy ireo mpikambana hafa ao amin'ny ekipan'ny Orina Mpanasoa.
Mamaky fady: Rehefa ny vehivavy iharan'ny fanorisorenana no mahazo tsiny
Mediam-bahoaka 25 Avrily 2018
Olana lehibe ao Ejypta ny fanorisorenana ara-nofo izay ny 83% amin'ireo vehivavy no nitatitra fa efa niharan'ny fanorisorenana ara-nofo. Nanoratra momba izany zava-misy izany ny bilaogera iray avy ao amin'ny tetikasa Miresaka ny Fady.
[Lahatsary] Sary Avy Amin'ny Tetikasa “Andavanandrom-piainan'ireo Vehivavy Ao Minya”
Mediam-bahoaka 26 Janoary 2012
Ity no manohy ireo andian-dahatsary telo amin'ireo lahatsary novokarin'ilay Ejiptiana mpamokatra sarimihetsika Mahmoud Saber izay nijery akaiky ny tsirairay tamin'ireo tetikasa ao anatin'ny fandraisana andraikitry ny Rising Voices any Ejipta. Ity lahatsary ity dia manasongadina ny tetikasa "Andavanandrom-piainan'ireo vehivavy ao Minya".